> Resource> tọghata> Olee otú iji tọghata eBooks ka EPUB Format
Nwere tọn dị iche iche nke eBooks na chọrọ ịgụ ha niile na iPhone, iPad, Sony Reader ọ bụ ngwaọrụ ọzọ? Ị ga mkpa iji tọghata ha niile wee na EPUB. EPUB rụrụ ọma na eReaders na bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na fọrọ nke nta niile eReaders. Ke ibuotikọ emi, anyị na-aga na-ewebata ụzọ iji tọghata eBooks na EPUB usoro.
PDF eBooks ka EPUB usoro. N'ozuzu na-ekwu okwu, PDF bụ ogugu na ọtụtụ obere ngwaọrụ. Otú ọ dị, ya nnukwu size nwere ike ịkụda ọsọ nke eReader. Mgbe ụfọdụ, ọ ọbụna na-akpata okuku mgbe meghere PDF na eReader. Ma ọ bụrụ na ngosipụta nke obere ngwaọrụ bụ obere, ị ga-mkpa ka ịpịgharịa azụ na-apụta na-agụ eBooks. Dozie nsogbu, i kwesịrị tọghata PDF ka EPUB site na iji Wondershare PDF to EPUB Converter. Dị nnọọ atọ clicks (pịa mbubata PDF faịlụ, setịpụrụ ntọala maka mmepụta EPUB na iti tọghata rụchaa ihe niile), na ị na-enwe ike iji nweta a zuru okè EPUB ebook na nta size ma ezi àgwà.
Plain ederede, HTML, DOC, chm na ihe oyiyi na-EPUB. Ị nwere ike zọpụta ọtụtụ eBooks na larịị ederede, oyiyi ma ọ bụ docx. Iji tọghata ndị a eBooks ka EPUB, ị dị nnọọ mkpa a dị ike EPUB Nrụpụta: MePub. Ọ na-enyere gị aka ịgbanwe ndị a eBooks n'ime EPUB format na gị onwe gị ịke. Dị nnọọ mbubata ndị a eBooks na hazie cover, font, ohere na ihe niile ị chọrọ.
Mobi ka EPUB. Ị nwere ike enwetatụbeghị ọtụtụ eBooks na Mobi format nke bụ ogugu on Kindle. Ịgbanwe Mobi ka EPUB, ị nwere ike na-agbalị freeware Calibre. Ọ bụ ike iji tọghata Mobi ka EPUB usoro. E wezụga na, ọ bụrụ na ị nwere ihe ndị ọzọ ebook formats dị ka n'okpuru kwuru, Calibre bụkwa aka.
Input Formats: CBZ, CBR, CBC, CHM, DJVU, EPUB, FB2, HTML, HTMLZ, udo, LRF, Mobi, ODT, PRC, PDB, PML, RB, RTF, SNB, TCR, TXTZ
Mmepụta Formats: EPUB, FB2, OEB, udo, LRF, Mobi, HTMLZ, PDB, PML, RB, PDF, RTF, SNB, TCR, TXT, TXTZ.